"လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၊ လိင်စိတ်မပါ ၀ င်မှု၊ ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံများကထုတ်ပေးသောအာရုံကြောဇီဝကမ္မဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုများနှင့်ဆက်စပ်သည်" ၏သုံးသပ်ချက် (Steele et al ။ , 2013) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn On
တကယ် SHORT VERSION: တချို့ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း, ဒါဝိဒ်သည် Ley နှင့်လေ့လာမှုပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် နီကိုးလ် Prause တစ်ဦးရေးသားဖို့တက်ပူးပေါင်း စိတ်ပညာယနေ့တွင် အကြောင်းကို blog post: သံမဏိ et al။ , 2013 "ဟုခေါ်Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက် - ဒါဟာစှဲမယ့်"။ အဆိုပါ blog post:5လအတွင်းသည်ထင်ရှား ရှေ့မှာ Prause ၏ EEG လေ့လာမှုကိုတရားဝင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ၎င်းနှင့်လုံးဝပတ်သက်မှုမရှိသောကြောင့်၎င်း၏ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသောခေါင်းစဉ်သည်လှည့်စားနေသည် Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက် ဒါမှမဟုတ် neuroscience အဲဒီမှာပေးအပ်သည်။ အဲဒီအစား, ဒါဝိဒ်သည် Ley ရဲ့, မတ်လ 2013 blog post: ကန့်သတ်သူ့ဟာသူတစ်ခုတည်းချို့ယွင်းချက် EEG လေ့လာမှုမှ - သံမဏိ et al။ , 2013 ။
အပ်ဒိတ်: ဒီ 2018 တင်ဆက်မှုအတွက်ဂယ်ရီ Wilson ကဒီလေ့လာမှုအပါအဝင်5မေးခွန်းထုတ်စရာများနှင့်အထင်မြင်မှားစေသောလေ့လာမှုများ, (နောက်ကွယ်မှအမှန်တရားဖျောထုတျသံမဏိ et al ။ , 2013): porn သုတေသန: အဖြစ်မှန်သို့မဟုတ်ထူးအိမ်သင်?
ဒါဝိဒ်သည် Ley ၏ရေးသားသူဖြစ်ပါသည် လိင်စွဲလမ်း၏သွန်သင်ချက်အမှား, သူဘာသာရေးအရလိင်နှင့်ညစ်ညမ်းစွဲနှစ်ဦးစလုံးငြင်းဆို။ Ley 30 ကျမ်းစာ၌ရေးထားသို့မဟုတ်ဒီတော့ဘလော့ဂ်ပို့စ်များထားပါတယ် တိုက်ခိုက်ခြင်းညစ်ညမ်း-ပြန်လည်နာလန်ထူဖိုရမ်များနှင့် porn စွဲနှင့် porn - သွေးဆောင် ED ထုတ်ပယ်။ Ley & Prause သည် Ley's ကိုရေးရန်ပူးပေါင်းခဲ့သည်သာမက စိတ်ပညာယနေ့တွင် အကြောင်းကို blog post: သံမဏိ et al။ , 2013, သူတို့ကနောက်ပိုင်းမှာထုတ်ဝေတပ်ဖွဲ့များပူးပေါင်း တစ်ဦး 2014 စက္ကူ porn စွဲထှကျသှားစပွေီး။
ကျနော်တို့မကြာခဏ Ley ရဲ့ကြည့်ပါ စိတ်ပညာယနေ့တွင် ဘလော့ဂ်ပို့စ် porn စွဲအကြောင်းကိုငြင်းခုံမှုများအတွက်ရည်ညွှန်း။ အများအပြား porn စွဲ၏တည်ရှိမှု debunking သူတို့ရဲ့အဓိကသက်သေအထောက်အထားအဖြစ်ကိုးကားနေစဉ်, အနည်းငယ်သောအရာကိုမဆိုစိတ်ကူးရှိသည် သံမဏိ et al။ , 2013 အမှန်တကယ်အစီရင်ခံခဲ့သည်။ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမရှိသောဂူးဂဲလ်ရှာဖွေမှုများသည်သင်၌ရှိပါက၊ သင်တင်လိုက်သည်။ အမှန်တကယ်တွင် Prause ၏ ၂၀၁၃ EEG လေ့လာမှုသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုပုံစံကိုအမှန်တကယ်ထောက်ခံသည်။ Ley (သို့) Prause ကပြောဆိုသည်ကိုမတွေ့ရှိခဲ့ပါ။ ခုနစ်ရွယ်တူချင်းပြန်လည်သုံးသပ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း သံမဏိ et al ။ ဘယ်လို 2013 ဖော်ပြရန် သံမဏိ et al ။ တွေ့ရှိချက်များကိုညစ်ညမ်းစွဲမော်ဒယ်မှထောက်ခံမှုချေးငှားရမည်။ အဆိုပါစာတမ်းများကြောင်းအတွက် YBOP ဝေဖန်မှုများနှင့်အညီငါတို့ရှိသမျှသဘောတူကြသည် သံမဏိ et al ။ အမှန်တကယ်အောက်ပါအချက်များကိုတွေ့ရှိရ:
မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများကိုကြားနေဓာတ်ပုံများကို (တွေကိုသူတို့ရဲ့စွဲလမ်း related ထိတွေ့တဲ့အခါမှာမူးယစ်ဆေးစွဲပြုပါအတိုင်းအတူတူ) ကိုဆွေမျိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေပိုမို cue-reactivity ကို (ပိုမိုမြင့်မား EEG ဖတ်) ရှိခဲ့ပါတယ်။
porn ပိုမို cue-reactivity ကိုအတူတစ်ဦးချင်းစီခဲ့ နည်းသော တစ်ဖက် (သို့သော်မပေး porn မှ masturbate မှအနိမ့်အလိုဆန္ဒ) နဲ့လိင်အဘို့အလိုဆန္ဒ။ ဒါဟာအာရုံခံစားမှုနှင့် desensitization နှစ်ဦးစလုံး၏လက္ခဏာသက်သေဖြစ်။
စာတမ်းသုံးခုသည်လေ့လာမှု၏ချို့ယွင်းချက်နည်းစနစ်နှင့်ခိုင်လုံသောခိုင်မာသောကောက်ချက်များကိုလည်းဖော်ပြထားသည်။ စက္ကူ # 1 မှတစ်ခုတည်းကိုသာမြှုပ်နှံသည် သံမဏိ et al ။, 2013 ။ စာတမ်းများ 2-8 ခွဲခြားစိတ်ဖြာကဏ္ဍများဆံ့ သံမဏိ et အယ်လ်။, 2013:
'' အမြင့် Desire 'သို့မဟုတ်' ရုံ '' တစ်ဦးစွဲ? မှတစ်ဦးကတုန့်ပြန် သံမဏိ et al။ (2013), Donald L. ဟီလ်တန်အသုံးပြုပုံဂျူနီယာ, MD
Valerie Voon, သောမတ်စ်ခမှဲ့, Paula BANCA, လော်ရာပေါ်တာ Laurel မောရစ်ရှိမုန်မစ်ချယ်, သူ Tatyana R. Lapa ဂျူဒီ Karr, နီးလ်အေနေဖြင့်နှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (2014) မပါဘဲပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Cue reactivity ၏အာရုံကြောဆက်စပ်, Harrison, မာ့ခ် N. Potenza နှင့်မိုက်ကယ် Irvine
ဘာစွဲ၏ကနဦးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ: တစ်ဦးချင်းအားနည်း, စစ်ကူယန္တရားနှင့်ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောယန္တရား "(2019) သူဝေ, ရှီ Yahuan, Zhang က wei, Luo အဘိဓါန် Wenbo, သူ Wiezhan အားဖြင့်
မှတ်စု: လေ့လာမှု ၂၅ ခုကျော်ကလိင်နှင့် porn စွဲသူများသည်“ မြင့်မားသောလိင်ဆန္ဒရှိသည်” ဟုဆိုကြသည်။ Prause ကသူမဘာသာရပ်များတွင်ပိုမိုမြင့်မားသော libidos များရှိသည်ဟုဆိုသော်လည်း Prause ကဤအချက်သည်အရေးကြီးသည်။
SPAN ဓာတ်ခွဲခန်းလေ့လာမှု -လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire မဟုတ်ဘဲ Hypersexuality, လိင်ပုံများအားဖြင့်ရူးနှမ်း Neurophysiological တုံ့ပြန်ချက်မှ Related ဖြစ်ပါတယ်"(အဖြစ်လူသိများ သံမဏိ et al။ , 2013) ။
ဤသည် 2013 EEG လေ့လာမှု porn စွဲ (သို့မဟုတ်အခြားနည်းလမ်းလိင်စွဲ) ၏တည်ရှိမှုဆန့်ကျင်သက်သေအထောက်အထားအဖြစ်မီဒီယာမွှမ်းတင်ခံခဲ့ရသည်။ အဖြစ်မှန်မှာတော့ YBOP porn စွဲ၏တည်ရှိမှုကိုထောက်ပံ့အတိုင်းဤလေ့လာမှုစာရင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အဘယ်ကြောင့်? ဘာသာရပ်များညစ်ညမ်းဓါတ်ပုံနှင့်ထိတွေ့သောအခါအဆိုပါလေ့လာမှုပိုမိုမြင့်မား EEG ဖတ် (P300) ကဖော်ပြခဲ့သည်။ စွဲသူတို့ရဲ့စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်သော (ထိုကဲ့သို့သောပုံရိပ်တွေကဲ့သို့) တွေကိုထိတွေ့သည့်အခါတစ်ဦးကပိုမိုမြင့်မား P300 တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
ထို့အပြင်လေ့လာမှုကဖော်ပြခဲ့သည် အတူတစ်ဦးချင်းစီ porn ပိုမို cue-reactivity ကို ခဲ့ တစ်ဖက်နှင့်အတူလိင်များအတွက်လျော့နည်းအလိုဆန္ဒ (porn မှ masturbate မှသော်လည်းမနိမ့်အလိုဆန္ဒ) ။ နောက်တစ်နည်းပြောရရင် ဦး နှောက်ကိုပိုမိုတက်ကြွစေတဲ့၊ ညစ်ညမ်းလိုတဲ့ဆန္ဒပြင်းပြသူတွေကတကယ့်လူတစ်ယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံတာထက်ညစ်တာကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာဘဲ။
စာနယ်ဇင်းများတွင်လေ့လာမှုပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်နီကိုးလ် Prause porn အသုံးပြုသူများသည်မျှသာမြင့်သောလိင်စိတ်ခဲ့ကြောင်းပြောဆိုထားသည်, သေးလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုအတော်လေးကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုကဆိုသည်။ တကယ်တော့, အဆိုပါ aligns, အစစ်အမှန်မိတ်ဖက်နှင့်အတူလိင်အဘို့အနိမ့်အလိုဆန္ဒနှင့်အတူ coupled, porn မှ cue-reactivity ကို သာ. ကြီး 2014 ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကဦးနှောက်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးလေ့လာမှု porn စွဲအပေါ်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း EEG လေ့လာမှု၏အမှန်တကယ်တွေ့ရှိချက်များသည်ရေးသားထားသည့်ခေါင်းစီးများနှင့်ရေးသားသူ၏တောင်းဆိုချက်များနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါ။
အောက်ပါဝေဖန်မှုငါတို့သည်သည်အခြေအမြစ်မရှိတောင်းဆိုမှုများဖျက်သိမ်းနှင့်လေ့လာမှုအမှန်တကယ်တွေ့ရှိခဲ့သောအရာကိုထုတ်ဖေါ် နှင့် အဘယ်ကြောင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ဘယ်တော့မှမသငျ့သညျ။ ငါမီဒီယာအတွက်ပြဋ္ဌာန်းသုံးခုအဓိကတောင်းဆိုချက်များအမှာစကားပြောကြားပေးသောရေတိုဗားရှင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
အပ်ဒိတ်: အများကြီးဇူလိုင်လ, 2013 ကတည်းက transpired သိရသည်။ UCLA နီကိုးလ် Prause ရဲ့စာချုပ် (အစောပိုင်း 2015) သက်တမ်းတိုးမပေးခဲ့ပါဘူး။ အဘယ်သူမျှမရှည်တစ်ခုပညာသင်နှစ် Prause ရှိပါတယ် မျိုးစုံမှတ်တမ်းတင်ဖြစ်စဉ်များနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်မှုအတွက်စေ့စပ် သူမ၏ကောက်ချက်နှင့်အတူသဘောမတူသူမည်သူမဆိုကဲ့ရဲ့ခံရဖို့ထိုက်တန်ပါတယ်ကြောင့်လူတွေဆွဲဆောင်ဖို့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော "astroturf" ကင်ပိန်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်။ Prause တစ်စုဆောင်းထားသည် ရှည်လျားသောသမိုင်း အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကနေပျက်ဆီးအထောက်အထားအစီရင်ခံရန်ဝံ့တဲ့သူစာရေးဆရာ, သုတေသီများ, ကုသ, သတင်းထောက်များကိုနှင့်အခြားသူများနှောင့်ယှက်၏။ သူမသည်ဖြစ်ပေါ်လာသော အဆိုပါညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူအတော်လေးအဆင်ပြေနေ, ဒီထဲကနေမြင်နိုင်ပါသည်အဖြစ် X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဝေဖန်သူများအဖွဲ့အစည်း (XRCO) ဆုအခမ်းအနား၏အနီရောင်ကော်ဇောပေါ်သူမ၏၏ပုံရိပ် (ညာဘက်အစွန်ဆုံး)။ (ဝီကီပီးဒီးယားအဆိုပါအဆိုအရ XRCO ဆုပေးပွဲ အမေရိကန်ကပေးတဲ့နေကြတယ် X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဝေဖန်သူများအဖွဲ့ နှစ်စဉ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖျော်ဖြေရေးအတွက်အလုပ်လုပ်လူများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဆုစက်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များအတွက်သီးသန့် reserved ပြသတစ်ခုတည်းသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူဖြစ်ပါတယ်။) ။ ဒါဟာအစ Prause ရှိစေခြင်းငှါပုံပေါ် ဘာသာရပ်များအဖြစ်ရရှိသော porn အဆိုတော် အခြားညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအကျိုးစီးပွားအုပ်စုတစ်စုကတဆင့်, အ အခမဲ့ခွန်းညွန့်ပေါင်း။ FSC မှရရှိသောဘာသာရပ်များကိုသူမတွင်အသုံးပြုခဲ့သည် ငှားရမ်း - သေနတ်လေ့လာမှု ထိုအပေါ် အကြီးအကျယ်စှနျး နှင့် အလွန်စီးပွားဖြစ်ဖြစ်သော“ Orgasmic Meditation” အစီအစဉ် (ယခုဖြစ်ခြင်း FBI ကစုံစမ်းစစ်ဆေး) ။ ချီးမွမ်းခြင်းကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့သည် မထောက်ပံ့တောင်းဆိုမှုများ အကွောငျး သူမ၏လေ့လာမှုများ၏ရလဒ်များကို နှင့်သူမ၏ လေ့လာမှုရဲ့နည်းစနစ်။ ပိုပြီးစာရွက်စာတမ်းများအဘို့အတွေ့: နီကိုးလ် Prause သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက် Porn စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအားဖြင့်ဖြစ်သနည်း
သင်တန်းသားများကို: ကြော်ငြာများမှတစ်ဆင့်စစ်ဆေးမှုခံယူသူ ၅၂ ဦး ကိုခေါ်ယူခဲ့သည်“လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေ၎င်းတို့၏ကြည့်ထိန်းညှိပြဿနာများကြုံနေရသူတောင်းခံသောကလူ။ " သင်တန်းသားများကို (ပျမ်းမျှအသက် 24 နှစ်) ယောက်ျား (39) နှင့်အမျိုးသမီး (13) ကိုရောနှောခဲ့ကြသည်။7သင်တန်းသားများကိုခဲ့ကြသည် မဟုတ်သောလိင်ကွဲ။ အဆိုပါ Prause လေ့လာရေးအတွက်အဓိကအားနည်းချက် (သံမဏိ et al ။, 2013, Prause et al ။, 2013, Prause et al ။, 2015) သည် Prause ၏ဘာသာရပ်များသည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်၊ အမှန်တကယ်သည်ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများဖြစ်သည်ကိုမည်သူမျှမသိရှိပါ။ 2013 အင်တာဗျူးတွင် နီကိုးလ် Prause (သူတို့ porn စွဲမကိုဆိုလိုသည်) ကိုသူမ၏ဘာသာရပ်များ၏နံပါတ်သာအသေးစားပြဿနာတွေကြုံတွေ့ကြောင်းဝန်ခံသည်:
porn စွဲခဲ့ဘာသာရပ်များ၏အရာထူထောင်မဟုတ်အပြင်, ဒီတစ်ခုအပါအဝင်အပေါငျးတို့သ Prause လေ့လာမှုများ, ပြုလျက်, စိတ်ရောဂါ, compulsive အပြုအမူတွေ, သို့မဟုတ်အခြားစှဲများအတွက်ဘာသာရပ်များမျက်နှာပြင်မဟုတ်။ ၎င်းသည်စွဲလမ်းမှုအပေါ်မည်သည့်“ ဦး နှောက်လေ့လာမှု” အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်၊
နောက်ထပ်ဆိုးဝါးအားနည်းချက်ကြောင့် သံမဏိ et al ။ ဘာသာရပ်များသောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောမ (အတူတူပါပဲသည်အခြား Prause လေ့လာမှုများအဘို့အတတ်) ။ သူတို့သည်7Non-လိင်ကွဲအပါအဝင်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး,ဒါပေမယ့်အားလုံးစံ, ဖြစ်နိုင်သည်စိတ်မဝင်စား, အထီး + အမျိုးသမီး porn ပြသခဲ့ကြသည်။ ဤသည်တစ်ဦးတည်းမဆိုတွေ့ရှိချက် discounts ။ အဘယ်ကြောင့်? လေ့လာမှုဖြစ်သည့်အကြောင်းပြီးနောက်လေ့လာမှု အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးသိသိသာသာရှိသည် ကွဲပြားခြားနားတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်မှဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှု။ လေးနက်စွဲသုတေသီများဂရုတစိုက်ဘာသာရပ်များကိုက်ညီဘယ်ကြောင့်ဒီဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ Prause လေ့လာရေးဘူးကတည်းကရလဒ်စိတ်မချရဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဘာမှတွင်မှအမှားဖို့အသုံးပြုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
အဘယ်အရာကိုသူတို့ခဲ့: သင်တန်းသားများကို 225 ဓါတ်ပုံတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးကြသည်အဖြစ် EEG ဖတ်ပါ (ဦးရေပြားပေါ်မှာလျှပ်စစ်လှုပ်ရှားမှု) ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ ပုံ၏ 38 လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရှိ. , အားလုံးပါဝင်ပတ်သက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်တယောက်သောသူ။ ဖတ်နေဒါကအထူးသဖြင့် EEG (P300) လှုံ့ဆော်မှုဖို့သတိတိုင်းတာသည်။ သင်တန်းသားများကိုလည်း4မေးခွန်းပြီးစီးခဲ့: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire Inventory (SDI), လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive စကေး (SCS), လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမေးခွန်းလွှာ (SBOSBQ) ၏သိမှုနှင့်အပြုအမူရလဒျကို၎င်း, ညစ်ညမ်း ConsumptionEffect စကေး (PCES) ။
“ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု” (Sexual Compulsivity Scale) ကိုအကဲဖြတ်ရန်အတွက်မေးခွန်းလွှာမှာအသုံးပြုခဲ့သည် porn စွဲများအတွက်စိစစ်မှုတူရိယာအဖြစ်အတည်ပြုမပေး။ ဒါဟာ 1995 အတွက် created နှင့်ထိန်းအကွပ်မဲ့လိင်ကိစ္စနှင့်အတူဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည် ဆက်ဆံရေး အေအိုင်ဒီအက်စ်ကပ်ရောဂါစုံစမ်းစစ်ဆေးနှင့် ဆက်စပ်. စိတ်တွင်, (မိတ်ဖက်နှင့်အတူ) ။ အဆိုပါ SCS ပြောပါတယ်:
ထို့အပြင်သူတို့သည်အမျိုးသမီးများအတွက်မေးခွန်းလွှာများကိုစီမံပေးခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း SCS ကိုတီထွင်သူကဤကိရိယာသည်အမျိုးသမီးများအတွက်စိတ်ပညာပြသခြင်းကိုပြလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုသတိပေးသည်။
(ရိုးရှင်းစွာထားပါက,3Prause လေ့လာရေးသံမဏိ et al ။, 2013, Prause et al ။, 2013, Prause et al ။, 2015) အပေါငျးတို့သပါဝင် တူညီတဲ့ဘာသာရပ်များ - နှင့်အကြောင်းအရာအားလုံးသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ဆိုးစွဲသူများဟုတ်မဟုတ်အကဲဖြတ်ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ ဘာသာရပ်အတော်များများသည်အသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်အခက်အခဲမရှိကြောင်း Prause ကဝန်ခံသည်။ ဘာသာရပ်များအားလုံးသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများနှင့်တရားဝင်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းကိုခွင့်ပြုရန်အပြာစွဲစွဲသူများကိုအတည်ပြုရန်လိုအပ်သည်။
အကျိုး: လေ့လာမှုပြောဆိုချက်ကို၏စာရေးဆရာများကိုစုဝေးစေ data အားလုံးကိုအကြားတစ်ခုတည်းကစာရင်းအင်းသိသိသာသာဆက်စပ်တွေ့ပြီမှ:
ဘာသာပြန်ချက်: အပျက်သဘောအနိမ့်အလိုဆန္ဒကိုဆိုလိုသည်။ porn ပိုမို cue-reactivity ကိုနှင့်အတူတဦးချင်းစီတနာတစ်ဦးနှင့်အတူလိင်ရှိသည်ဖို့အောက်ပိုင်းအလိုဆန္ဒရှိခဲ့ (သို့သော်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့အနိမ့်အလိုဆန္ဒ) ။ နောက်တစ်နည်းပြောရရင် ဦး နှောက်ကိုပိုမိုတက်ကြွစေတဲ့၊ ညစ်ညမ်းလိုတဲ့ဆန္ဒပြင်းပြသူတွေကတကယ့်လူတစ်ယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံတာထက်ညစ်ညမ်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တာပါပဲ ဒီတွေ့ရှိချက်ကိုဒီနိဂုံးချုပ်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်:
ကောက်ချက်: အဖြစ် hypersexuality ကိုနားလည်ဘို့အကျိုးသက်ရောက်မှု မြင့်မားသောအလိုဆန္ဒ, အစား disorders ထက်ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
ဟမ်? ဘယ်လိုအဆိုး (အောက်ပိုင်း) (အထက်) အပြုသဘောသို့လှည့်ရခဲ့တာလဲ အဘယ်ကြောင့်နှင့်အတူ correlating porn ပိုမို cue-reactivity ကိုပြု၏ အနိမ့်အလိုဆန္ဒ တစ်ဦးနိဂုံးချုပ်ဟု hypersexuality တစ်ဖက်ခဲနှင့်အတူလိင်ရှိသည်ဖို့အဖြစ်နားလည်သဘောပေါက်ထားရန်ဖြစ်ပါသည် မြင့်မားတဲ့အလိုဆန္ဒ, အဘယ်သူမျှမသိတယ်, ဒါပေမယ့်ဒီထူးထူးဆန်းဆန်း turnaround အဆိုပါခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်အများအပြားများအတွက်အခြေခံခဲ့ပါတယ်။ နီကိုးလ် Prause များအတွက်ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်လည်ပတ်အလုပ်လုပ်နေတယ် သံမဏိ et al။ , 2013 မီဒီယာတွင် Prause က“ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုမရှိ” ဟူသောပြောဆိုချက်ကိုထောက်ခံရန်အောက်ပါအငြင်းပွားမှုများကိုတင်ပြခဲ့သည်။
သံမဏိ et al။ ယင်းကြောင်းစောဒကတက်သည် ဆက်စပ်မှုမရှိခြင်း EEG ဖတ်ရှုခြင်းနှင့်အချို့သောမေးခွန်းလွှာများအကြားညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုမရှိခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
တောင်းဆိုချက်နံပါတ် ၁ - ဘာသာရပ်များ၏ ဦး နှောက်တုံ့ပြန်မှုသည်အခြားစွဲလမ်းသူများနှင့်ကွဲပြားသည် (ဥပမာအားဖြင့်ကိုကင်းဖြစ်သည်) ။
အထက်ပါဖော်ပြချက်များမှာ -ဦးနှောက်ကတခြားစွဲတူသောကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပါဘူး"ထောက်ခံမှုမပါဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်အခိုင်အမာဘယ်နေရာမှာအမှန်တကယ်လေ့လာမှုမှာတွေ့ရှိခဲ့ခံရဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းကို Prause ၏အင်တာဗျူးများတွင်သာတွေ့နိုင်သည်။ ဒီလေ့လာမှုမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေကိုကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာ EEG (P300) ဖတ်မှုပိုများလာပါတယ်။ စွဲသူများသည်သူတို့၏စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောရုပ်ပုံများကိုကြည့်သည့်အခါဖြစ်ပျက်သောအရာဖြစ်သည်။ ကိုကင်းစွဲပေါ်မှာဤလေ့လာမှု) ။ အဆိုပါအောက်မှာမှတ်ချက် စိတ်ပညာယနေ့တွင် အင်တာဗျူး Prause ၏, ဂုဏ်ထူးဆောင်ယောဟနျသအေဂျွန်ဆင်ကပြောကြားခဲ့သည်အကြီးတန်းစိတ်ပညာပါမောက္ခ:
နီကိုးလ် Prause (အမည်မသိကဲ့သို့) နှင့်ယောဟန်အေဂျွန်ဆင်အကြားဆွေးနွေးငြင်းခုံနှင့်အတူတစ်ဦးကစာမျက်နှာ: သံမဏိအပေါ်ဆရာယောဟနျအေဂျွန်ဆင် et al ။ , 2013 (နှင့်ဂျွန်ဆင်သံမဏိ et al အကြောင်းကိုသည်သူ၏ဆောင်းပါးတွင်အောက်မှာမှတ်ချက်တွေအပိုင်းများတွင်နီကိုးလ် Prause ဆွေးနွေး။ ) ။
ရိုးရှင်းသော: ဘာသာရပ်များ၏ ဦး နှောက်သည်အခြားစွဲလမ်းသူများနှင့်ကွဲပြားသည်ဟုဆိုသည်မှာထောက်ခံမှုမရှိပါ။ တကယ်တော့ 2014 ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကလေ့လာမှု (Voon et al ။ , 2014) ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ သံမဏိ et al ။ သံမဏိ et al: နှင့်ဂျွန်ဆင်နှင့်အတူသဘောတူညီခဲ့ကြသည်။ ကြားနေဓါတ်ပုံတွေကို (ရန်ဆွေမျိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေတုံ့ပြန်ပိုမိုမြင့်မား P300 အစီရင်ခံတင်ပြကိုးကား 25) ။ အဆိုပါကင်းဘရစ်လေ့လာမှုမှ:
ဤ 2015 ယင်းမှ neuroscience စာပေပြန်လည်သုံးသပ်ရန် အကျဉ်းချုပ် သံမဏိ et al.:
"ဒါကြောင့်ဒီစာရေးဆရာများ  သူတို့၏လေ့လာမှုသည် CSB, Voon et al အားစွဲလမ်းမှုပုံစံကိုအသုံးချခြင်းကိုငြင်းဆိုသည်။ ဤအစာရေးဆရာများကဤမော်ဒယ်ကိုအထောက်အထားအထောက်အထားများအမှန်တကယ်ပေးခဲ့သည်ဟုဆို
တောင်းဆိုမှုနံပါတ် ၂– ခေါင်းစဉ်များနှင့်လေ့လာမှု၏နိဂုံးချုပ်က“ hypersexuality” ကိုနားလည်သဘောပေါက်ကြောင်းဖော်ပြသည်မြင့်မားသောအလိုဆန္ဒ"ဒါပေမယ့်လေ့လာမှုကပိုမို ဦး နှောက်ကိုတက်ကြွစေနိုင်သောအကြောင်းအရာများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများရှိသည်" ဟုဆိုသည် ဒီထက်အလိုဆန္ဒ လိင်အဘို့။
လိင်မှုဆိုင်ရာရုပ်ပုံများကို ဦး နှောက်၏တုန့်ပြန်မှုသည် hypersexuality ၏ကွဲပြားခြားနားသောမေးခွန်းပုံစံများဖြင့်ကြိုတင်မခန့်မှန်းနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုသာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏အတိုင်းအတာအားဖြင့်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သည်။ တစ်နည်းဆိုရသော်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကို ဦး နှောက်ကွဲပြားမှုကိုမြင့်မားသောလိင်စိတ်ခံစားမှုထက်မကရှင်းပြသည်ဟုမထင်ရ။
Prause က "ဟုပြောသည်သတိပြုပါတစ်ဦးအတိုင်းအရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏ "မဟုတ်, က enitre လိင်ဆိုင်ရာဆန္ဒများစာရင်း” ။ မေးခွန်း ၁၄ ခုစလုံးကိုတွက်ချက်သောအခါဆက်စပ်မှုမရှိ၊ ခေါင်းစဉ်မရှိ။ ပို၍ ရှုပ်ထွေးစေသည့်အချက်မှာလေ့လာမှုခေါင်းစဉ်ဖြစ်သည် "လိင်ဆန္ဒ"အမှန်တကယ်တွေ့ရှိရသောအရာထက်အဆိုပါ SDI ကနေပူးပေါင်းလိင်အကြောင်းကိုရွေးချယ်ထားသောမေးခွန်းများကိုအတူအနုတ်လက္ခဏာဆက်စပ်မှု" အားလုံး SDI မေးခွန်းများကိုတွက်ချက်ကြသောအခါဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမဆက်စပ်"။
ဤတွင်ရဲ့ ယောဟနျသအေဂျွန်ဆင်ပါရဂူဘွဲ့မှတ်ချက် အဆိုပါ Prause အင်တာဗျူးအောက်မှာ:
ရိုးရှင်းသော: EEG ဖတ်ခြင်းနှင့်လိင်မှုဆိုင်ရာဆန္ဒ ၁၄ ခုပါသောမေးခွန်း ၁၄ ခုအကြားဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ နှုတ်ဆက်လေ့လာမှုခေါင်းစဉ်နှင့်ခေါင်းစဉ်များ။ အပြုသဘောဆက်နွယ်မှုရှိနေလျှင်တောင်မှ“ မြင့်မားသောဆန္ဒ” သည်“ စွဲလမ်းမှု” မှနှစ် ဦး နှစ်ဖက်သီးသန့်သီးသန့်တည်ရှိသည်ဟူသောပြောဆိုချက်သည်ရှုပ်ထွေးသည်။ အမှတ်ဖို့ပို, P300 ဖတ်ခဲ့ကြသည် အနုတ်လက္ခဏာ တစ်ဖက်နှင့်အတူလိင်အဘို့အလိုဆန္ဒနှင့်အတူ - (33 ။ r =) ဆက်နွယ်နေကြောင်း။ ရိုးရိုးလေးဆိုရလျှင် - porn ပိုမို cue-reactivity ကိုသူဘာသာရပ်များခဲ့ နည်းသော တကယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်လိင်ဆက်ဆံဘို့အလိုဆန္ဒ။
တောင်းဆိုချက်နံပါတ် ၃ - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမသမာမှုများစကေးရှိဘာသာရပ်များ၏ EEG ဖတ်ခြင်းနှင့်ဘာသာရပ်များရမှတ်များအကြားဆက်စပ်မှုမရှိခြင်းကြောင့်ညစ်ညမ်းသောအကျင့်စွဲခြင်းမရှိပါ။
အဆိုပါ SCS, ဒုတိယမေးခွန်းလွှာ (ကဲ့သို့ပင်အဆိုပါ CBSOB) အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများမရှိပါ။ ဒါဟာ "hypersexual" ဘာသာရပ်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများထိန်းချုပ်မှုထဲက screening ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။
လေ့လာခြင်း သံမဏိ et al ။ ဤရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်စာပေ၏ပြန်လည်သုံးသပ်မှုမှ - အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ၏ neuroscience: တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် Update ကို (2015)
ထို့အပြင်စိတ္တဇအတွက်စာရင်းနိဂုံး [ "မဟုတ်ဘဲ disorders ထက် hypersexuality အဖြစ်မြင့်မားတဲ့အလိုဆန္ဒ, နားလည်သဘောပေါက်ဘို့အကျိုးသက်ရောက်မှုဆွေးနွေးနေကြပါတယ်"303] (စ။ 1) P300 လွှဲခွင်အဆိုးတနာတစ်ဦးနှင့်လိင်ဆက်ဆံဘို့အလိုဆန္ဒဆက်နွယ်နေကြောင်းသောလေ့လာမှုရဲ့တွေ့ရှိချက်စဉ်းစားရာအရပျထဲကပုံရသည်။ ဟီလ်တန် (2014) တွင်ရှင်းပြခဲ့သကဲ့သို့, ဒီတွေ့ရှိချက် [ "တိုက်ရိုက်မြင့်မားသောအလိုဆန္ဒအတိုင်း P300 ၏အနက်ကိုဆန့်ကျင်"307] ။ အဆိုပါဟီလ်တန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနောက်ထပ်တစ်ဦးကိုထိန်းချုပ်အုပ်စုတစ်စု၏မရှိခြင်းနှင့် "မြင့်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ" အကြားခွဲခြားမှုမှ EEG နည်းပညာ၏နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းနှင့် "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမလှူ" ဟုအဆိုပါဆပ်ကြောင်းအကြံပြု သံမဏိ et al ။ [uninterpretable တွေ့ရှိချက်307].
လိင်မှုဆိုင်ရာရုပ်ပုံများကို ဦး နှောက်၏တုန့်ပြန်မှုသည် hypersexuality ၏ကွဲပြားခြားနားသောမေးခွန်းပုံစံများဖြင့်ကြိုတင်မခန့်မှန်းနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုသာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏အတိုင်းအတာအားဖြင့်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သည်။ တနည်းအားဖြင့် hypersexuality လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုအတွက်ဦးနှောက်ကွဲပြားခြားနားမှုရှင်းပြဖို့ပေါ်လာပါဘူး ရုံမြင့်မားသောလိင်စိတ်ရှိခြင်းထက်မဆိုပို။"
ချီးမွမ်းခြင်းကို "တစ်ဦးအတိုင်းအရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏ "တစ်ခုလုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ Inventory" က။ မေးခွန်း ၁၄ ခုစလုံးကိုတွက်ချက်သောအခါဆက်စပ်မှုမရှိပါ၊ ဇောက်ထိုးလှည့်ရန်ခေါင်းစဉ်မရှိပါ။ ချီးကျူးထောင့်ကသူမထပ်တူပြောဆိုသည် UCLA ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်:
သံမဏိ et al ပေမယ့်။ အမှန်တကယ်အစီရင်ခံ နည်းသော cue-reactivity နှင့်ဆက်နွှယ်သောပူးပေါင်းပါ ၀ င်သည့်လိင်ဆက်ဆံလိုသည့်ဆန္ဒ“ မြင့်မားသောလိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ” သည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုအတွက်အပြန်အလှန်သီးသန့်ဖြစ်သည်ဟုမယုံနိုင်လောက်အောင်ပြောဆိုခြင်းကိုဖြေရှင်းရန်အရေးကြီးသည် အခြားစွဲလမ်းမှုအပေါ်အခြေပြုသည့်ယူဆချက်ကိုစဉ်းစားပါကယင်း၏ဆင်ခြင်တုံတရားကင်းမဲ့မှုသည်ရှင်းလင်းလာသည်။ (ပိုမိုသိရန် Steele et al ၏ဤဝေဖန်မှုကိုကြည့်ပါ။ - မြင့်မားသောဆန္ဒ 'သို့မဟုတ်' မျှသာ '' စွဲ? Donald L. Hilton, Jr. မှ Steele et al အားတုံ့ပြန်မှု။.)
တနည်းကား၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစွဲလမ်းမှုသည်မိမိကိုယ်ကိုမကြာခဏလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေးများ၊ ခံစားချက်များနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုဖော်ပြသည့်တွန်းအားများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ “ မြင့်မားသောလိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ” သည်စွဲလမ်းမှုတည်ရှိခြင်းကိုဖယ်ရှားပေးရန်အကြံပြုလိုခြင်းသာဖြစ်သည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာ“ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုသည်အလွန်မြင့်မားသောဆန္ဒ” ပုံစံကိုတိုက်ရိုက်ချေပခြင်းဖြစ်သည်။
တို့ကအဓိကပြောဆိုချက်ကို သံမဏိ et al ။, 2013 ယင်းကြောင့် ဆက်စပ်မှုမရှိခြင်း EEG ဖတ်ခြင်း (P300) ဘာသာရပ်များနှင့်အချို့သောမေးခွန်းလွှာများသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုမရှိဟုဆိုလိုသည်။ ဆက်စပ်မှုမရှိခြင်းကိုအဓိကအကြောင်းပြချက်နှစ်ခုက -
အဆိုပါမေးခွန်းနှစ်ခု Steele et al ။ EEG လေ့လာမှုနှစ်ခုစလုံးတွင် 'porn စွဲ' မှုအားအကဲဖြတ်ရန်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုမှု / စွဲလမ်းမှုအတွက်စစ်ဆေးရန်အတွက် validation မလုပ်ပါ။ စာနယ်ဇင်းများတွင် Prause က EEG ရမှတ်များနှင့်“ hypersexuality” အကြေးအကြားဆက်စပ်မှုမရှိခြင်းကိုအကြိမ်ကြိမ်ထောက်ပြခဲ့သည်။ သို့သော်ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများအတွက်ဆက်စပ်မှုတစ်ခုမျှော်လင့်ရန်အကြောင်းပြချက်မရှိပါ။
Prause- အကယ်၍ သင်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများသည်စွဲလမ်းသည်ဟုယူဆပါက၊ တိုးမြှင့်တုန့်ပြန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံများကိုဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ထိုးထွင်းသိမြင်မှု၏ပြit'sနာဟုသင်ထင်လျှင်၎င်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံများကိုတုန့်ပြန်မှုကျဆင်းလာလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်လိမ့်မည်။ ပြီးတော့ဒီဆက်ဆံရေးတစ်ခုမှကျွန်ုပ်တို့မမြင်ရတာကဒီပြproblemနာရှိတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုစွဲလမ်းမှုအဖြစ်ရှုမြင်ဖို့ကြီးကြီးမားမားအထောက်အပံ့မရှိဘူးလို့ပြသနေပါတယ်။
အဆိုပါ upshot သောသံမဏိပစ္စည်း et al ဖြစ်ပါတယ်။ မ တကယ်တော့ဆန်းစစ် wလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြtroublနာတက်သူများ၏ ဦး နှောက်တုံ့ပြန်မှုသည်“ တူညီသည်"စွဲ၏တုံ့ပြန်မှုအဖြစ်။ သူတို့ကကိုကင်းလေ့လာမှုတွင်အသုံးပြုသော ERP variable များကိုအတူတကွမသုံးခဲ့ကြ၊ သူတို့တွင် abstinent group နှင့် control group ကိုမသုံးခဲ့ကြချေ။ ထို့ကြောင့်သူတို့၏ရလဒ်များကိုနှိုင်းယှဉ်မှုမှာ“ ပန်းသီးနှင့်ပန်းသီးတို့ဖြစ်သည်။ ”
ဒါ့အပြင် Steele et al ။ ပိုမိုမြင့်မားသော EEG ပျမ်းမျှနှုန်းသည်လိင်မှုနှိုးဆွမှုကိုပိုမိုမြင့်မားသည်ဟုယူဆသော်လည်းဘာသာရပ်များ၏ EEG ပျမ်းမျှအားဖြင့်မြေပုံတစ်ပုံလုံးတွင်ရှိသည်။ သူတို့ထဲကတချို့ဟာစွဲလမ်းသူတွေဖြစ်ပြီးတချို့ကမဟုတ်ဘူး။ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကိုပိတ်ထားသည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်း။ အချက်အလက်များစွာသည် P300 ဖတ်ခြင်းကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ အောက်ပါမှသုံးသပ်ကြည့်ပါ အခြား P300 လေ့လာမှု:
လိင်ဆိုင်ရာပုံများသို့မဟုတ်ရှင်းလင်းပြတ်သားသောရုပ်ရှင်များအတွက် cue-reactivity နှင့်ပတ်သက်သည့်အနာဂတ်လေ့လာမှုများသည်ရလဒ်များကိုသူတို့၏အနက်ဖွင့်ဆိုရာတွင်အလွန်သတိထားရမည်။ ဥပမာအားဖြင့်လျော့နည်းသွားသော ဦး နှောက်၏တုန့်ပြန်မှုသည်“ စွဲလမ်းခြင်းမရှိ” မည့်အစား၊